Sawirro: Ganacsiga waratada Afrika - BBC News Somali
Waxaa la rumeysan yahay in in ka badan kala bar dhaqaalaha Afrika uu ka yimaado ganacsiga aan rasmiga ahayn, isla markaana ay ka shaqeeyaan 80% shaqaalaha qaaradda. Ma tahay dowladuhu in ay xakameeyaan ganacsiga aan rasmiga ahayn? Waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada waratada loo yaqaano oo noolashooda uga warramay BBC.
Lahaanshaha sawirka BBC's Randy Joe Saah
Image caption Peter Nkemashi oo Cameroon u dhashay, ayaa ku haminayay in uu noqdo garsoore maxkamadeed, balse waalidkii ma aanay awoodin kharashka waxbarashadiisa. Hadda waxa uu dukaan yar ku leeyahay caasimadda Yaounde. "Ma xasdo dadka maalqabeenka ah. Waxaan haystaa wax ku filan qoyskeyga. Taasi ayaan u aqaanaa noolal wanaagsa,"ayuu uu sheegay BBC Africa.
Lahaanshaha sawirka BBC's Lucy Walker
Image caption Dad badan oo ku nool dalalka Afrika ayaa dowladahooda ugu baaqaya in ay xakameeyaan ganacsiga aan rasmiga ahayn, oo canshuur laga qaado. Waratada ayaa inta badan dhibaatooyin kala kulma maamulada magaalooyinka, kuwaasoo doonaya in ay wadooyinka ka kaxeeyaan, ama dukaanley dareemaysa in khatar ganacsi ay ku yihiin waratada.
Lahaanshaha sawirka BBC's Patience Atuhaire
Image caption Sandra Birabwa, oo 24 jir ah ayaa sheegtay in dadka ay ugu yeeraan "Sandra Socotooy" maadaama ay saacado badan lug ku marto wadooyinka caasimadda Kampala ayadoo dhar wareejiso. Waxa ay sheegtay in ay jeceshahay dukaan ay leedahay, balse xilligan la joogo ay "kirada qaali tahay." Sida ay sheegtay, waxaa adag in la helo shatiga ganacsiga rasmiga ah.
Lahaanshaha sawirka BBC's Rana Jawad
Image caption Maxamed Al-Xed, oo 63 jir ah, kuna nool caasimadda Tunisia ee Tunis, ayaa 180 dollar bishiiba ka sameeya farshaxan uu iibiyo, waxaana uu ka biilaa qoyskiisa oo 5 xubnood ka kooban. "Waxaan shaqadan hayay 16 sano. Ka hor waxaan ka shaqeyn jiray warshad. Waxaan rabaa in ilmahayga ay helaan shaqooyin u wanaagsan."
Lahaanshaha sawirka BBC's Alhassan Sillah
Image caption Mamadou Saliou Barry ayaa cajalado ku iibiya caasimadda Conakry ee Guinea. "Xaalku hadda ma wanaagsano, oo qaar ka mid ah fannaaniinta maxalliga ah ayaa nagu eedeeya in aan si sharci darra ah heesahooda u iibino, dhibaato badan ayayna noo geystaan. Balse xaqiiqda ayaa ah in aan iibin cajalado been abuur ah."ayuu yiri.
Lahaanshaha sawirka BBC's Umaru Fofana
Image caption Comfort Conteh oo Sierra Leone u dhalatay, ayaa maalintii 8 dollar ka faa'iido rooti ay ku iibiso caasimadda Freetown, waxaana ay biishaa hooyadeed iyo canug ay dhashay. "Waxaan baran jiray kabalyeerinnimo, balse kharash ayaan u waayay. Waxaan rajeynayaa in meel wanaagsan aan ka shaqeeyo."
Lahaanshaha sawirka BBC's Sammy Awami
Image caption Maxamed, oo 28 jir ah, ayaa qalabka telefoonnada gacanta ku iibiya Dar es Salaam, Tanzania. Waxa uu dabberaa kharashka ay iskuulka ku dhigtaan walaalihii. "Muddo dheer ayaan ganacsigan ku jiray, mana doonayo in aan mid kale u wareego. Balse waxaan jeclahay in uu ii ballaarto." ayuu yiri.